Beeraleyda Penza waxay heli doonaan in kabadan 180 milyan oo rubi oo loogu talagalay dib u soo celinta dhulka - Nidaamka Baradhada
Xaraashka Penza waxay heli doonaan wax kabadan 180 milyan oo rubles si dib looguugu yeero dhulka
Sanadka 2020, soosaarayaasha beeraha ee Penza waxay heli doonaan 181,2 milyan rubles si loo hirgaliyo tillaabooyinka dib ula soo noqoshada dhul beereedka.
Sida ku xusan heshiiskii ay wada galeen dowladda gobolka Penza iyo Wasaaradda Beeraha ee Ruushka, gobolka waxaa loo qoondeyn doonaa 166,7 milyan rubles oo ka mid ah lacagta federaalka si loogu fuliyo howlaha dhul beereedka. Wadar ahaan, 181,2 milyan rubles ayaa loo qoondeyn doonaa xaddididda, waraabinta iyo tallaabooyinka dhaqanka iyo farsamada, iyadoo la tixgalinayo maalgelinta miisaaniyadda gobolka.
Agrarians ee gobolka Nizhny Novgorod ayaa helay 140 milyan oo rubir oo kabitaan ah oo loogu talagalay horumarinta dib u soo celinta dhulka
Sida Wasiir ku-xigeenka Beeraha Olga Gatagova xustay, taageerada gobolka ee dib-u-soo-celinta dhulku waxay xaqiijin doontaa jiritaanka soo-saareyaasha beeraha waxayna dib-u-dhigaysaa kororka sicirka alaabada beeraha, waxay sii wadaysaa shaqaalaynta, waxayna hubinaysaa hirgelinta Doodaha Amaanka Cuntada ee Xiriirka Ruushka.
Source: Wasaaradda Beeraha ee Gobolka Penza
Tags: dib u sheegashada dhulkaGobolka Penzakabista waraabka
Ololaha beerin ayaa ka bilaabmay gobolka Sverdlovsk
Warshadda baradhada ee Mareykanka waxay heli doontaa $ 50 milyan oo taageero ah
Maxay baradhada qiimaha ugu kaceen gobolka Penza
Shirkadda Penza waxay heshay dalag badan oo khudaar ah
Waraabka - Yaa u baahan roob roob dalab ah?
Baradhada baradhada ee gobolka Penza
Ruushku waxay u beddelaan cunto raqiis ah
Amarka qabyada ah “Ansixinta hababka iyo shuruudaha tijaabinta kala duwanaanshaha, isku duubnaanta iyo xasiloonida guusha xulashada” dooda
Sanadka 2020, beero abuurka dalagyada soosaarka dalaggu way ku badanayaan Russia
10-ka gobol ee beeraha ee Ruushka ayaa halis ugu jira abaarta